धुर्मुसले ट्विटर मार्फत लेखे मन छुने स्ट्याटस ….(स्ट्याटस सहित ) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/धुर्मुसले ट्विटर मार्फत लेखे मन छुने स्ट्याटस ….(स्ट्याटस सहित )
धुर्मुसले ट्विटर मार्फत लेखे मन छुने स्ट्याटस ….(स्ट्याटस सहित )
सामाजिक काममा तिब्र रुपमा अगाडि बढिरहेका धुर्मुस ले ट्विटर मार्फत मन छुने स्ट्याटस लेखेका छन । धुर्मुसले ट्विटर मा लेखेका छ्न : भारत बाट लाखौ को संख्यामा भित्रीयका ना ङ्गा बाबा हरुलाइ करोडौ खर्च गर्न सक्ने सरकार आफ्नै देशमा भयका भोका नाङ्गा सडकको पेटिमा सुत्न बाध्य भयकालाइ अन्देखा गर्दछ ।
धुर्मुसले ट्विटर मार्फत आफ्नो दुख बिसायका छन । उनले लाखौ दिन दुखिहरुलाइ सहयोग गर्दै आयका छन । आफू भोकै बसेर अरुलाइ पेट भर्ने काम गर्छ्न धुर्मुस सुन्तलि ।
हिजो मात्र धुर्मुस सुन्तली द्वारा निर्मित चलचित्र सेन्टी भाइरस देशै भरिका हलहरुमा प्रदर्शन भैरहेको छ । उक्त चलचित्रले एकै दिनमा करोड नागेको बताछन धुर्मस सुन्तली । उक्त चलचित्र बाट आयको पैसाले बन्दै गरेको रंगशाला थप निर्माणमा खर्च गर्ने बतायका छन । उक्त चलचित्रले अरु चलचित्रको रेकर्ड तोडेको पनि बताउछन । निकै खुशी र हर्षित देखिन्छन धुर्मुस सुन्तली ।उक्त चलचित्र हेर्न छुटाउनु भयका दर्शकहरुलाइ नजिकै रहेको हलमा गयर चलचित्र हेरिदिन आग्रह गर्दछन ।
यो पनि पढ्नुहोस …भनिन्छ दैबको लिला कसैले टारेर टार्न सकिँदैन । एक यस्तो घटना जुन घटनाले मुटुनै चिसो बनाउछ । बिगत केही समय देखि वसन्त कुमार शाही पर्देशिनु परेको थियो । घर मा एक छोरी र श्रीमतिको सपना साहाकार बनाउन भनी पर्देशियका वसन्त घर आउने निधो गरे । घरमा छुट्टै खालको खुशी थियो तर त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न सकेन । केही काम बिषेशले उनकी श्रीमति चेली तामाङ्ग घर भन्दा बाहिर निस्केको बेला दुई जना सवार मोटरसाइकलले ठक्कर दियर मोटरसाइकल चालक फरार भय ।
ठक्कर दिने अथवा उक्त मोटरसाइकल का धनी अबिशेक केसि अहिले अस्ट्रेलियामा छन । उनकी ९ बर्षिया छोरी आलिया शाही आफ्नो आमालाइ भेट्न भनी पुगिन । पिडित चेली तामाङ्ग भने बोल्न नसक्ने स्थितिमा हस्पिटल को सैयामा पल्टिरहेकी छिन । उनको श्रीमान न्यायको निमित्त दौडिरहेका छन भने अहिले सम्म न्याय भने पायका छैनन ।
चेली तामाङ्ग न त बोल्न सक्छिन न त हिड्न नै । यस्तो अचेत अवस्था बनाउने अपराधीलाई कारबाही होस भनि उनका श्रीमान प्रसासनमा धाइरहेका छ्न । अहिले उनलाइ सहयोग भन्दा न्याय चाहियको बताउछन ।